Joshua 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
7 Zvino vanakomana vaIsraeri vakaita chinhu chokusatendeka pamusoro pechinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe pakuti Akani+ mwanakomana waKami, mwanakomana waZabdhi, mwanakomana waZera, wedzinza raJudha, akatora chimwe chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe.+ Jehovha akabva atsamwira vanakomana vaIsraeri kwazvo.+ 2 Joshua akabva atuma varume kuti vabve muJeriko vaende kuguta reAi,+ riri pedyo neBheti-avheni,+ kumabvazuva kweBheteri,+ akati kwavari: “Endai munosora nyika.” Naizvozvo varume vacho vakaenda, vakasora Ai.+ 3 Pashure paizvozvo vakadzokera kuna Joshua vakati kwaari: “Vanhu vose ngavarege kuenda. Varume vanenge zviuru zviviri kana varume vanenge zviuru zvitatu ngavaende varwise Ai. Musanetsa vanhu vose nokuenda ikoko, nokuti ivo vashomanana.” 4 Naizvozvo varume vanenge zviuru zvitatu pavanhu vacho vakaenda ikoko, asi vakatiza varume veAi.+ 5 Varume veAi vakauraya varume vanenge makumi matatu nevatanhatu vavo, vakavatevera+ kubvira pakatarisana negedhi kusvikira kuShebharimu, vakaramba vachivauraya pamutenu. Naizvozvo mwoyo yevanhu yakatanga kunyunguduka ikava semvura.+ 6 Joshua akabvarura majasi ake, akawira pasi nechiso chake+ pamberi peareka yaJehovha kusvikira manheru, iye nevarume vakuru vaIsraeri, uye vakaramba vachiisa guruva pamisoro yavo.+ 7 Zvino Joshua akati: “Haiwa, Changamire Ishe Jehovha, makayambutsirei vanhu ava Jodhani, kuzongotiisa muruoko rwevaAmori kuti vatiparadze here? Kudai takangotsunga hedu takaramba tichigara mhiri kwaJodhani!+ 8 Pamusoroi, haiwa Jehovha, asi ndingatiiko Israeri zvaatiza vavengi vake? 9 VaKenani nevagari vose vomunyika vachazvinzwa, uye vachatikomba vakaparadza zita redu panyika;+ zvino muchaitei nokuda kwezita renyu guru?”+ 10 Jehovha akatiwo kuna Joshua: “Iwe, simuka! Nei wawira pasi nechiso chako? 11 VaIsraeri vatadza, vadarikawo sungano yangu+ yandakavarayira; vatorawo chimwe chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe,+ vaba,+ vakachichengetawo chakavanzika+ uye vachiisawo pakati pezvinhu zvavo.+ 12 Vanakomana vaIsraeri havazokwanisi kukunda vavengi vavo.+ Vachatiza vavengi vavo, nokuti vava chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe. Handizovizve nemi kutoti mukatsakatisa chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe pakati penyu.+ 13 Simuka! Tsvenesa vanhu,+ uti, ‘Zvitsvenesei mangwana, nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe chiri pakati penyu, haiwa imi vaIsraeri.+ Hamuzokwanisi kukunda vavengi venyu kusvikira mabvisa chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe pakati penyu. 14 Uyai mangwanani, dzinza nedzinza, uye dzinza richabatwa naJehovha+ richaswedera pedyo, mhuri nemhuri, uye mhuri ichabatwa naJehovha ichaswedera pedyo, imba neimba, uye imba ichabatwa naJehovha ichaswedera pedyo, murume mumwe nomumwe. 15 Anobatwa aine chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe achapiswa nomoto,+ iye nezvinhu zvake zvose, nokuti adarika sungano+ yaJehovha uye nokuti aita chinhu choupenzi chinonyadzisa pakati paIsraeri.”’”+ 16 Joshua akabva afumomuka akaita kuti vaIsraeri vaswedere pedyo, dzinza nedzinza ravo, uye dzinza raJudha rakabatwa. 17 Akazoita kuti mhuri dzaJudha dziswedere pedyo, akabata mhuri yevaZera,+ achibva azoita kuti mhuri yevaZera iswedere pedyo, murume mumwe nomumwe, Zabdhi akabatwa. 18 Akazoita kuti imba yake iswedere pedyo, murume mumwe nomumwe, uye Akani mwanakomana waKami, mwanakomana waZabdhi, mwanakomana waZera, wedzinza raJudha, akabatwa.+ 19 Joshua akabva ati kuna Akani: “Ndapota, mwanakomana wangu, kudza Jehovha Mwari waIsraeri+ ureurure kwaari,+ ndapota ndiudze,+ Wakaitei? Usandivanzira.”+ 20 Akani akapindura Joshua akati: “Chokwadi ini—ndakatadzira Jehovha Mwari waIsraeri,+ ndakaita izvi nezvozvo. 21 Pandakaona+ nguo yomukuru mukuru yokuShinari,+ yakanaka, pazvinhu zvinopambwa, nemashekeri esirivha mazana maviri nechigodo chimwe chete chendarama, chinorema mashekeri makumi mashanu, ndakabva ndazvida,+ ndikazvitora;+ tarirai! zvakavanzwa pasi pakati petende rangu nemari yacho iri pasi penguo.”+ 22 Joshua akabva atuma nhume, dzikamhanyira kutende, dzikaiona yakavanzwa mutende rake nemari iri pasi payo. 23 Naizvozvo vakazvitora pakati petende, vakauya nazvo kuna Joshua nevanakomana vose vaIsraeri, vakazvidurura pamberi paJehovha. 24 Zvino Joshua, nevaIsraeri vose vaaiva navo, vakatora Akani+ mwanakomana waZera nesirivha yacho nenguo yacho yomukuru mukuru nechigodo chacho chendarama+ nevanakomana vake nevanasikana vake nenzombe dzake nembongoro dzake neboka rake rezvipfuwo netende rake nezvinhu zvake zvose, vakaenda nazvo kubani reAkori.+ 25 Joshua akabva ati: “Nei watiunzira dambudziko?+ Jehovha achakuunzira dambudziko nhasi.” Naizvozvo vaIsraeri vose vakamutema nematombo,+ vachibva vazovapisa nomoto.+ Nokudaro vakavatema nematombo. 26 Vakaita murwi mukuru wematombo pamusoro pake, uchiripo kusvikira nhasi.+ Jehovha akazvidzora pakutsamwa kwake kukuru.+ Ndokusaka nzvimbo iyoyo yave ichinzi Bani reAkori,+ kusvikira nhasi.